Booranatti hajajoota waraana Liyuu Poolis 3 booji'an ,Hararge Bahaatti ammoo Liyuu Poolis bulchaa aanaa Gursum ka durii ijjeese jedhan
Harargee Bahaa aanaa Gursumii fi Cinaksenitti akka warrii lafaa jedhutti Liyuu Polis fulaa hedduutti nama aate.
Guyyaa afuriin durattuu fa lola guddaatti jira.Fulaan itti nama hadhan jehdan; Kalmaalee, Ambaaroo, Waaccu Lammafaa fa.Fulaa haga tokkotti Liyuu Poolis ganama saatii 11 jalqabee nama hadhee taatullee ummatatti bahee dhowwate.
Akka warrii achii dubbifne jedhetti waraanii Liyuu Poolis kun bulchaa aanaa Gursum ka durii fi itti aanaa itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa aanaa Baabbillee obboo Salaad Mohaammad fi gurbaa koree bittineessaa Oromiyaa durii keessa jiru Abdujabbaar kalee galgala ijjeese.
Ijjeechaa jedhan tana ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa mirkanfachuuf yaallee dadhabne.
Waraanii Liyu Poolis kun itti aanaa damee nageenna aanaa Gursum obboo Mohammed Abdirahimanillee qabee akka malee dhaanee ijjeessuuf jennaan balee bu’ee baqatee achii dhufanii fuudhanii amma hospital Hiywot jedhan Harar keessa jirutti wallaanachuutti jira jedhan.
Jara ijjeesan jedhan kana Harar magaalaa Bombaas keessatti qaban. Ummatii Gursumilleen ijjeechaa tanaaf hardha ganama saatii 2tti hiriira bahee bulchiinsaan wal dhabee rakkoo himatee dhakhaachaan wal hadhe.
Goofaa fi Waacillee
Lolii ummataa fi Liyuu Poolis godina Booranaa aanaa Mooyyalee magaalaa Goofaa fi gara Liiban keessaa ammoo Odaa Diimaa,Simintoo gama Waacillee sun faatii hardha wal hin aanee taatullee waluma eegachuutti jira. Mooyale keessaa Caamuqilleetti waraanii waluma dura ciisa.
Waraana kalee Goofatti wal hadhaniin ammoo akka warrii lafaa jedhutti waraana biyya Soomalii gara Baidoa dhufe jedhan keessaa hajaja waraanaa nama lama hajaja 100 fi hajajoota waraanaa lama mi’uma waraanaa isaanii waliin booji’an.
“Guyyaa sadii karaa bullee dhufne.Nu nama 400ti.Namii 300 Goofatti goree namii 100 ammoo Waacilletti dabre. Oromoon lafa teessan fudhatte jedhanii nu ergan.Al-Jamaa Al-Sunnaa waliin jirra,” jedhe jedhan warrii lola Goofaa keessatti qabanii amma harka waraana mootummaa jiru kun.
Gara Waacilleetti sunilleetti hajajaa waraanaa achuma Sooamlii dhufe jedhan tokko qaban.Gama kaaniin ammoo itti gaafatamaan mootummaa naannoo Oromiyaa,obboo Addisuu Areggaa akkana jedhee FB ufii irratti barreesse:
Yeroo ammaa kana naannoon Oromiyaa rakkoo keessa jirti. Rakkoo uumamaa fi rakkoo nam-tolchee keessa jirru xiqqaa fi guddaan ni beeka. Bahaa fi kibba Oromiyaatti rakkoo nageenyaa uumameen lubbuun qaaliin lammiilee keenyaa darbaa jira.Qaama namaa fi qabeenyaa irra miidhaan gahaa jira. Lola daangaa Oromiyaa irraan ummata nagaa irraatti baname keessatti waraanni Ripaablika Somaliyaa( Moqdishoo) irratti hirmaataa akka jiran mirkanaa'ee jira. Mootuummaan Naannoo Oromiyaa gaaffiin daangaas ta’e dhimma biraatiin walqabatee naannoolee olla waliin ka’u karaa nagaa fi waliin jireenya ummatootaa cimsuun hiikamuu qaba jedhee amana. Kanaa achitti namoota nagaa irratti lola banamu cimsee balaaleffata.
Bulchiinsii mootummaa naannoo Somalee Itoophiyaa ammoo lola Liyuu Poolisitti naannoo Oromiyaa dhufee nama hadhee fixuutti jiraa jedhan kana hin fudhannee tun oduu dharaati isumaa ABO-tti waan akkanaa hojjachuutti jiraa jedha.Deebii mootummaa naannoo Somaalee fi ta mootummaa naannoo Oromiyaa bori itti deebina.